I-Shasta Ikhabethe Lohlaka elinombono - I-Airbnb
I-Shasta Ikhabethe Lohlaka elinombono
Shasta County, California, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Cees
U-Cees Ungumbungazi ovelele
Lokhu ukuphunyuka kwekhabethe lakho le-A Frame elitholakala kumahektha amane anezinkuni elibheke e-Shasta Lake. I-master loft kanye nompheme omkhulu wangaphambili ubheka phezu kwesigodi ngokubukwa okumangalisayo kweziqongo zezintaba, amawa e-granite kanye ne-Hirz Bay. Itholakala phakathi kwamapaki Kazwelonke ama-3 amahle - iLassen Volcanic, iRedwood, neCrater Lake. Siyakwamukela ukuthi uzwe impilo ye-cabin kanye nobuhle basendle nxazonke. Iqembu elikhulu? Bheka olunye uhlu lwethu, i-'Tawny Owl Cottage' etholakala eduze kwe-Treehouse.
Ikhishi - lihlome ngokugcwele isitofu, isiqandisi, ifriji, i-microwave, i-toaster, i-blender, i-coffee maker, igrinder yekhofi, amabhodwe, amapani, izitsha, izitsha. Iyunithi ye-A/C. Siphinde sibe ne-grill kumpheme ongemuva eduze nekhishi!
Igumbi lokugezela - elitholakala phansi, ishawa kanye nobhavu omncane, futhi lihlanganisa amathawula, izicubu, insipho, nezinto ezibalulekile.
Living Room - usofa (extra donsa umbhede we-TWIN), izihlalo, amatafula, isitofu sezinkuni, ukufudumeza okuphakathi, imidlalo, izincwadi, ne-WiFi
Indawo yokudlela - itafula nezihlalo, indawo yokudlela ekahle kanye nendawo yokusebenza
Amakamelo Okulala Amakhosi kanye Nezihambeli - akhiwe phezulu, i-master loft inendlovukazi futhi ibheke igumbi lokuhlala kanye nombono wechibi. Igumbi lezivakashi elingemuva linombhede ophelele kanye nomtapo wezincwadi owakhelwe ngaphakathi. Womabili amagumbi anawo wonke amalineni ombhede, izingubo zokulala, imicamelo, ifeni ephezulu. Khumbula ukuthi izitebhisi ziphakeme kakhulu, i-loft ephezulu ayifanele izingane ezincane. Sinayo ibhedi yengane ephathekayo ukuze kube lula kuwe, kodwa sincoma ukuthi izingane zihlale phansi ukuze ziphephe.
Umpheme wangaphambili - itafula lezihlalo. Wamukelekile ukumisa emphemeni ngaphansi kwezihlahla nezinkanyezi (okuyinto, ngendlela, ezokushaya ingqondo yakho).
Isitezi esingemuva - i-BBQ, iwasha / isomisi
Ukupaka kuyatholakala phambi kwendlu imoto eyodwa noma ezimbili futhi indawo yokupaka eyengeziwe ingahlelelwa isikebhe uma uceliwe (sithumele umyalezo ngemuva kokubhuka)
Izingane ezincane azivunyelwe ekamelweni eliphezulu, ikakhulukazi ngaphandle kokuqondisa komuntu omdala.
Amadekhi angaphambili nangemuva angase ajatshulelwe, kodwa nakekela futhi ubuke izingane njengoba indawo ingase ibe ummango ezindaweni eziseduze namadekhi.
I-Treehouse isemgwaqweni ongenamasango, lapho kukhona ezinye izindlu ezi-3 kuphela kulayini. Uzozizwa uhlangene nemvelo njengoba uhlezi ngaphandle kwesiteki futhi ubona izihlahla kuphela (futhi mhlawumbe inyamazane noma ezimbili) phakathi kwakho neShasta Lake.
Sifuna uzizwe usekhaya endlini yethu yehlathi enokuthula. Izinga lokusebenzelana kwethu likuwe, kodwa thina kanye/noma umgcini wendlu sizotholakala njengoba kudingeka ukuze siphendule imibuzo noma sixazulule inkinga. Sizokuthumelela imanuwali yethu yendlu ngaphambi kokufika kwakho, ukuze wazi kahle ukuthi yini ongayilindela.
Futhi sinethebhulethi esendaweni ukuchaza zonke izinto ezisetshenziswayo, inikeze izikhombisi-ndlela eziya ezindaweni zethu eziyimfihlo eziyintandokazi, futhi ikusize ube nokuhlala kwasendaweni okuningi ngangokunokwenzeka.
Siwumbhalo kuphela noma i-imeyili ekude ekuxazululeni noma yikuphi ukukhathazeka kwakho, imibuzo kanye nezidingo zakho ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Sifuna uzizwe usekhaya endlini yethu yehlathi enokuthula. Izinga lokusebenzelana kwethu likuwe, kodwa thina kanye/noma umgcini wendlu sizotholakala njengoba kudingeka ukuze siphend…
UCees Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Shasta County namaphethelo